သိလညျးသိခငျြတယျ…..မေးလညျးမမေးရဲဘူး - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
All Articlesမြိုးဆကျပှားကနျြးမာရေးအမြိုးသမီး ကနျြးမာရေးအမြိုးသား ကနျြးမာရေး
“ သိလညျးသိခငျြတယျ…..မေးလညျးမမေးရဲဘူး “
လိငျမှုရေးရာကိစ်စမြားနဲ့ပတျသကျရငျ ပှငျ့လငျးမွငျသာမှုမရှိသလို အတနျငယျအကဲဆတျတဲ့ပတျဝနျးကငျြကွောငျ့ မလိုလားအပျတဲ့ ကနျြးမာရေးပွသနာတှေ တှကွေုံ့ရလရှေိ့ပါတယျ…..အထူးသဖွငျ့ အမြိုးသမီးတှမှောပေါ့……
မိမိခဈြသူနဲ့ လကျမထပျခငျအတူနတောတှေ …. ခုလို နိုကျကလပျတှေ ပေါမြားလာပွီး မိနျးကလေးတှပေါ အသောကျအစားရှိလာတဲ့ခတျေမှာ One Night Stand (တဈညတာအတူကုနျဆုံးခွငျး) တှလေညျး မြားလာပါတယျ…..
ပွသနာက…. အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့….ခဈြသူနဲ့ဖွဈဖွဈ….ခဈြသူမဟုတျတဲ့သူစိမျးယောကျြားတဈဦးနဲ့ပဲဖွဈဖွဈ…..အကာအကှယျ(ကှနျဒုံး)မသုံးဘဲအတူနလေိုကျ ပွီးရငျ….. ဘာဆကျလုပျရမယျ….ဘာဆကျလုပျသငျ့တယျဆိုတာ မသိကွတာပါပဲ…….
သိလညျးမသိသလို…..သိခငျြရငျတောငျ မေးမွနျးဖို့ ရှကျရှံ့တာ မဝံမရဲဖဈတာမြိုးတှကွေောငျ့ ဘဝပကျြလောကျတဲ့ထိ ကနျြးမာရေးအန်တရာယျဆိုး တှေ ကွုံတှသှေ့ားရတဲ့ မိနျးကလေးတှလေညျးမနညျးပါဘူး။
ဒါကွောငျ့ မိနျးကလေးတှအေနနေဲ့ အကာအကှယျမဲ့လိငျဆကျဆံပွီးရငျ ဘာတှလေုပျသငျ့တယျ ဘာတှမေလုပျသငျ့ဘူးဆိုတာမြိုးလေးတှေ ဘေးလူကိုမေးစရာမလိုဘဲ သိထားစဖေို့ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
-> အိမျသာထဲတနျးပွေးပါ ။
ဘာလို့လဲ? ကိုယျဝနျရတာ မရတာနောကျမှ….ပထမဆုံးအနနေဲ့ အမြိုးသမီးတှဟော ဆီးလမျးကွောငျးပိုးဝငျလှယျတာမို့လိျု့ သငျ့အဖျောဆီက ပိုးတှေ ဆီးလမျးကွောငျးထဲမဝငျနိုငျအောငျ လိငျဆကျဆံပွီးတာနဲ့ အိမျသာထဲသှားပွီး ရှူးရှူးပေါကျလိုကျပါ။ ဆီးနဲ့အတူ ရောဂါပိုးမြားပါသှားအောငျလို့ပါ။ ပွီးရငျ သနျ့ရှငျးအောငျသခြောဆေးကွောပါ။
-> အရေးပျေါတားဆေးကို စောနိုငျသမြှစောစောသောကျပါ။
အရေးပျေါတားဆေးဟာ အတူနပွေီး 72နာရီ (3ရကျအတှငျး) သောကျရတာမှနျပမေယျ့ စောစောသောကျနိုငျလေ ကိုယျဝနျတားနိုငျတဲ့အာနိသငျပိုရှိလဖွေဈလို့ တတျနိုငျသမြှအခြိနျမဆှဲဘဲစောစောသောကျပါ။ (အရေးပျေါတားဆေးနဲ့ပတျသကျပွီး အသေးစိတျကို My Doctor Page နဲ့ My Doctor Website မှာ လလေ့ာဖတျရှုနိုငျပါတယျ။)
* သငျနဲ့အတူနခေဲ့တဲ့အဖျောမှာ HIV ပိုးရှိတယျ / HIV ပိုးရှိတယျလို့ သံသယရှိရငျ ဆရာဝနျနဲ့အမွနျဆုံးသှားရောကျတိုငျပငျပွီး လိုအပျတဲ့ဆေးဝါးကုသမှုအမွနျဆုံးခံယူပါ။ * အခွားလိငျမှတဈဆငျ့ကူးစကျနိုငျသောရောဂါမြားအတှကျ လိုအပျသော စမျးသပျစဈဆေးမှုခံယူပါ။
-> မိမိကိုယျကို စိတျဖိစီးမှုမပေးပါနဲ့။
မိမိလုပျရပျအပျေါ အလှနျအမငျးရှကျရှံ့ခွငျး၊အပွဈရှိသလိုခံစားရခွငျး၊ အလှနျအမငျးစိတျဖိစီးခွငျး မဖွဈပါနဲ့။ မိမိရဲ့ယုံကွညျစိတျခရြသော သူငယျခငျြး၊မိသားစုဝငျ (သို့မဟုတျ) ဆရာဝနျတဈဦးထံ ပွောပွတိုငျပငျနိုငျပါတယျ။
->နောကျအကွိမျတှအေတှကျ စိတျခရြမယျ့ကိုယျဝနျတားနညျးကို ရှေးခယျြပါ။
အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ ပထမအကွိမျ (သို့) တဈကွိမျတဈခါ အကာအကှယျမဲ့လိငျဆကျဆံမိနိုငျပမေယျ့….နောကျတဈကွိမျ လိငျဆကျဆံဖို့ ရှိလာခဲ့မယျဆိုရငျတော့ သငျရော သငျ့အဖျောအတှကျပါ စိတျခရြမယျ့ လိငျဆကျဆံနညျးနဲ့ကိုယျဝနျတားနညျးကို ကွိုတငျလလေ့ာထားသငျ့ပါတယျ။ ဆရာဝနျနဲ့တိုကျရိုကျတိုငျပငျနိုငျသလို My Doctor Page နဲ့ My Doctor Website မှာလညျး ဝငျရောကျဖတျရှုလလေ့ာနိုငျပါတယျ။
-> ရာသီလာရမယျ့အခြိနျမလာဘူးဆိုရငျ ဆီးစဈကွညျ့ပါ။
ရာသီရကျကြျောကြျောခွငျး ဆီးစဈလို့ကိုယျဝနိမရှိကွောငျးပွနတေယျဆိုရငျ နောကျတဈပတျထပျစောငျ့ကွညျ့ပွီး ရာသီမလာသေးလြှငျ ဆီးထပျစဈကွညျ့ပါ။
-> အဖွူဆငျးခွငျး၊ အနံ့နံခွငျး၊မိနျးမကိုယျနဲ့အနီးတဈဝိုကျမှာ အနာပေါကျခွငျးမြားဖွဈပျေါပါက ဆရာဝနျနှငျ့တိုငျပငျပါ။
အထကျပါလက်ခဏာရပျတှဟော လိငျမှတဈဆငျ့ကူးစကျတတျသော ရောဂါမြားရဲ့ရှပွေ့ေးလက်ခဏာမြားဖွဈနိုငျတာမို့ ဆရာဝနျနဲ့စောစီးစှာ ပွသပွီးကုသမှုခံယူပါ။
-> ၆လအကွာမှာ ဆရာဝနျထံ ထပျမံသှားရောကျပွီး
HIV/AIDS အပါအဝငျ လိငျမှတဈဆငျ့ကူးစကျတတျသောရောဂါမြားရှိ/မရှိ ထပျမံစဈဆေးမှုပွုလုပျပါ။ အခြို့ရောဂါမြားဟာ လိငျဆကျဆံပွီးပွီးခငျြး လက်ခဏာမပွ၊စဈဆေးမတှရှေိ့နိုငျတာမို့ ၆လအကွာမှာ ထပျမံစဈဆေးမှုပွုလုပျသငျ့ပါတယျ။
အခွားထပျသိခငျြတဲ့ ကနျြးမာရေးအကွံဉာဏျမြားကိုလညျး My Doctor Chat Box မှတဈဆငျ့ မေးမွနျးဆှေးနှေးနိုငျပါသညျ။
ဒေါကျတာမြိုး (UM 1)
“ သိလည်းသိချင်တယ်…..မေးလည်းမမေးရဲဘူး “
လိင်မှုရေးရာကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ရင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသလို အတန်ငယ်အကဲဆတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် မလိုလားအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြသနာတွေ တွေ့ကြုံရလေ့ရှိပါတယ်…..အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေမှာပေါ့……
မိမိချစ်သူနဲ့ လက်မထပ်ခင်အတူနေတာတွေ …. ခုလို နိုက်ကလပ်တွေ ပေါများလာပြီး မိန်းကလေးတွေပါ အသောက်အစားရှိလာတဲ့ခေတ်မှာ One Night Stand (တစ်ညတာအတူကုန်ဆုံးခြင်း) တွေလည်း များလာပါတယ်…..
ပြသနာက…. အကြောင်းကြောင်းကြောင့်….ချစ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်….ချစ်သူမဟုတ်တဲ့သူစိမ်းယောက်ျားတစ်ဦးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်…..အကာအကွယ်(ကွန်ဒုံး)မသုံးဘဲအတူနေလိုက် ပြီးရင်….. ဘာဆက်လုပ်ရမယ်….ဘာဆက်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ မသိကြတာပါပဲ…….
သိလည်းမသိသလို…..သိချင်ရင်တောင် မေးမြန်းဖို့ ရှက်ရွံ့တာ မဝံမရဲဖစ်တာမျိုးတွေကြောင့် ဘဝပျက်လောက်တဲ့ထိ ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ဆိုး တွေ ကြုံတွေ့သွားရတဲ့ မိန်းကလေးတွေလည်းမနည်းပါဘူး။
ဒါကြောင့် မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးရင် ဘာတွေလုပ်သင့်တယ် ဘာတွေမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာမျိုးလေးတွေ ဘေးလူကိုမေးစရာမလိုဘဲ သိထားစေဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
-> အိမ်သာထဲတန်းပြေးပါ ။
ဘာလို့လဲ? ကိုယ်ဝန်ရတာ မရတာနောက်မှ….ပထမဆုံးအနေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်လွယ်တာမို့လို့် သင့်အဖော်ဆီက ပိုးတွေ ဆီးလမ်းကြောင်းထဲမဝင်နိုင်အောင် လိင်ဆက်ဆံပြီးတာနဲ့ အိမ်သာထဲသွားပြီး ရှူးရှူးပေါက်လိုက်ပါ။ ဆီးနဲ့အတူ ရောဂါပိုးများပါသွားအောင်လို့ပါ။ ပြီးရင် သန့်ရှင်းအောင်သေချာဆေးကြောပါ။
-> အရေးပေါ်တားဆေးကို စောနိုင်သမျှစောစောသောက်ပါ။
အရေးပေါ်တားဆေးဟာ အတူနေပြီး 72နာရီ (3ရက်အတွင်း) သောက်ရတာမှန်ပေမယ့် စောစောသောက်နိုင်လေ ကိုယ်ဝန်တားနိုင်တဲ့အာနိသင်ပိုရှိလေဖြစ်လို့ တတ်နိုင်သမျှအချိန်မဆွဲဘဲစောစောသောက်ပါ။ (အရေးပေါ်တားဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ကို My Doctor Page နဲ့ My Doctor Website မှာ လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။)
* သင်နဲ့အတူနေခဲ့တဲ့အဖော်မှာ HIV ပိုးရှိတယ် / HIV ပိုးရှိတယ်လို့ သံသယရှိရင် ဆရာဝန်နဲ့အမြန်ဆုံးသွားရောက်တိုင်ပင်ပြီး လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးကုသမှုအမြန်ဆုံးခံယူပါ။ * အခြားလိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်နိုင်သောရောဂါများအတွက် လိုအပ်သော စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုခံယူပါ။
-> မိမိကိုယ်ကို စိတ်ဖိစီးမှုမပေးပါနဲ့။
မိမိလုပ်ရပ်အပေါ် အလွန်အမင်းရှက်ရွံ့ခြင်း၊အပြစ်ရှိသလိုခံစားရခြင်း၊ အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးခြင်း မဖြစ်ပါနဲ့။ မိမိရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသော သူငယ်ချင်း၊မိသားစုဝင် (သို့မဟုတ်) ဆရာဝန်တစ်ဦးထံ ပြောပြတိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
->နောက်အကြိမ်တွေအတွက် စိတ်ချရမယ့်ကိုယ်ဝန်တားနည်းကို ရွေးချယ်ပါ။
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပထမအကြိမ် (သို့) တစ်ကြိမ်တစ်ခါ အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမိနိုင်ပေမယ့်….နောက်တစ်ကြိမ် လိင်ဆက်ဆံဖို့ ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သင်ရော သင့်အဖော်အတွက်ပါ စိတ်ချရမယ့် လိင်ဆက်ဆံနည်းနဲ့ကိုယ်ဝန်တားနည်းကို ကြိုတင်လေ့လာထားသင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့တိုက်ရိုက်တိုင်ပင်နိုင်သလို My Doctor Page နဲ့ My Doctor Website မှာလည်း ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
-> ရာသီလာရမယ့်အချိန်မလာဘူးဆိုရင် ဆီးစစ်ကြည့်ပါ။
ရာသီရက်ကျော်ကျော်ခြင်း ဆီးစစ်လို့ကိုယ်ဝနိမရှိကြောင်းပြနေတယ်ဆိုရင် နောက်တစ်ပတ်ထပ်စောင့်ကြည့်ပြီး ရာသီမလာသေးလျှင် ဆီးထပ်စစ်ကြည့်ပါ။
-> အဖြူဆင်းခြင်း၊ အနံ့နံခြင်း၊မိန်းမကိုယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာ အနာပေါက်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်ပါက ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
အထက်ပါလက္ခဏာရပ်တွေဟာ လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများရဲ့ရှေ့ပြေးလက္ခဏာများဖြစ်နိုင်တာမို့ ဆရာဝန်နဲ့စောစီးစွာ ပြသပြီးကုသမှုခံယူပါ။
-> ၆လအကြာမှာ ဆရာဝန်ထံ ထပ်မံသွားရောက်ပြီး
HIV/AIDS အပါအဝင် လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါများရှိ/မရှိ ထပ်မံစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပါ။ အချို့ရောဂါများဟာ လိင်ဆက်ဆံပြီးပြီးချင်း လက္ခဏာမပြ၊စစ်ဆေးမတွေ့ရှိနိုင်တာမို့ ၆လအကြာမှာ ထပ်မံစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
အခြားထပ်သိချင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအကြံဥာဏ်များကိုလည်း My Doctor Chat Box မှတစ်ဆင့် မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
ဒေါက်တာမျိုး (UM 1)